‘Kani Waa Cashar Kubadda Cagta Ah’ – Capello Oo Ka Adkaysan Waayey Wixii Ay Chelsea Ku Samaysay Juventus - Laacib
HomeWararka Champions League‘Kani Waa Cashar Kubadda Cagta Ah’ – Capello Oo Ka Adkaysan Waayey Wixii Ay Chelsea Ku Samaysay Juventus
‘Kani Waa Cashar Kubadda Cagta Ah’ – Capello Oo Ka Adkaysan Waayey Wixii Ay Chelsea Ku Samaysay Juventus
Tababaraha ruug-caddaaga ah ee Talyaaniga ee Fabio Capello ayaa ka adkaysan kari waayey wixii ay Chelsea ku samaysay Juventus kulankii ay xalay Stamford Bridge dhex jiid-jiideen ee ay ku garaaceen 4-0.
Fabio Capello oo 75 jir ah ayaa ka mid ahaa falan-qeeyeyaashii kulankii xalay ee istuudiyaha telefishanka Sky Sports, waxaana uu indhihiisa ku arkay kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga oo bisad yar ku noqotay Stamford Bridge.
Capello ayaa sheegay in waxa uu Thomas Tuchel ka samaynayo garoomadu ay yihiin ‘cashar kubadda cagta ah’ oo ay tahay in dadka kale ka bartaan, iyadoo uu macallinka reer Germany oo Chelsea yimid bishii January ee sannadkan uu ciyaartiisii 50aad xalay guul kusoo khatimay.
Juventus oo ka mid ahayd kooxaha uu Fabio Capello tababaraha usoo noqday, waxay la hoyatay afar gool oo laga dhaliyey iyadoo aanay iyaguna wax gool ah dhalin.
Trevoh Chalobah ayaa furay gool-dhalinta kulankan, waxaanay u ahayd goolkiisii koowaad ee uu Champions League ah ee uu dhaliyo, waxaana laba kale ku daray labada ciyaartoy ee ay kulliyadda da’yarta Chelsea kasoo wada qalin-jabiyeen ee Reece James iyo Callum Hudson-Odoi, halka uu midka afraadna raaciyey Timo Werner oo daqiiqaddii 90aad shabaqa soo taabtay.
Fabio Capello oo ka hadlayey ciyaartan ayaa waxa uu amaanay Thomas Tuchel, isaga oo yidhi: “Kani waa cashar dhab ah oo kubadda cagta ah oo ay Chelsea dhigayso. Aynu tusaale usoo qaadano
“Liverpool, waa koox weerar ah oo toosan, caawana waxaynu aragnay sida Chelsea cadaadiska u samaynaysay, orodka iyo in aanay marnaba kubadda dib u celinayn. Marnaba xagga dambe kama aanay soo bilaabin, waxaanay ahaayeen kuwo hore u socod ah, hal baasna goolhayaha uma aanay geynin.
“Waxa jira orod aan horyaalka Talyaaniga laga isticmaalin. Waxa jira farqi weyn oo dhinaca orodka iyo tayada ah marka la barbar-dhigo horyaalkayaga (Talyaaniga). Waxa jira cadaadis kale. Waxa jira taakalo, inaad si adag kusoo gasho, in aanay garsooreyaashu qabanin qaladaadka, taas ayaa dib u dhigaysa halkan (Serie A)
“Talyaaniga in badan ayaad goolhayaha la ciyaaraysaa. Iyagu (Tuchel iyo Klopp) waa tababareyaal Jarmal ah, waxaananu u baahanahay in aanu wax ka barano oo aanu dib isku cusboonaysiino.”
Fabio Capello ayaa Champions League ku guuleystay xilli ciyaareedkii 1993-94 isaga oo ahaa tababaraha AC Milan, sidoo kalena waxa uu tababare usoo noqday Real Madrid, Roma iyo Juventus, halka xulka qaranka England uu macallin u noqday sannadkii 2007, kaddibna uu iska casilay afar bilood ka hor tartankii Euro 2012.
Saddex sannadood ayuu joogay Ruushka oo uu xulka dalkaas tababare u noqday, sagaal biloodna kooxda reer China ee Jiangsu, ka hor intii aanu March 2018 ku dhawaaqin inuu ka fadhiistay guud ahaan shaqada tababarenimo.